Onye na-ahụ maka njem nleta na-ezute Seychelles Hospitality and Association of Tourism
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Onye na-ahụ maka njem nleta na-ezute Seychelles Hospitality and Association of Tourism
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Hospitallọ Ọrụ Ọbịa na Njem Nleta Seychelles
Onye minista na -ahụ maka ihe si mba ofesi na njem nlegharị anya, Sylvestre Radegonde, na onye odeakwụkwọ ọhụrụ maka njem nlegharị anya, Oriakụ Sherin Francis, ezutela kọmitii ndị ọbịa na ndị njem nlegharị anya nke Seychelles (SHTA) iji kpaa maka nsogbu ndị na -emetụta mgbake ndị njem na Seychelles, na -emesi obi ike. ahia nke nkwa gọọmentị na -eme ka ụlọ ọrụ nwee ihe ịga nke ọma yana mbọ gọọmentị na -aga n'ihu na -arụkọ ọrụ n'akụkụ ndị ọzọ.
SHTA nwetara nkwado site n'aka Minista mba ofesi na njem nlegharị anya maka ọdịmma mpaghara na obodo.
Nzukọ kwa ọnwa n'etiti ngalaba abụọ ahụ ga -amaliteghachi.
A ga-akpọ ndị ọkachamara njem nlegharị anya sitere na ụlọ ọrụ nkeonwe ka ha sonye na kọmitii ndụmọdụ ọhụrụ iji nyere gọọmentị aka nke ọma n'ihe gbasara nsogbu ndị njem.
Minista Radegonde kwuru na mbido nzukọ a, nke emere na nke mbụ n'afọ a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ site na ikpo okwu ịntanetị ZOOM na ngwụcha ọnwa gara aga, na ngalaba ya ga -eburu n'uche arịrịọ nkwado nke SHTA rịọrọ maka mmasị mpaghara na akụnụba sara mbara. A ga -abawanye mmekorita na ndụmọdụ ya, site na ịmaliteghachi nzukọ a na -eme kwa ọnwa n'etiti Ngalaba Njem Nleta na SHTA.
N'ịkọwa ndị otu bọọdụ SHTA na nhazigharị na -eme n'ime ngalaba njem, Minista Radegonde kwuru na mgbasa nke Njem nleta Seychelles Board (STB) na njikọta nke ndị isi njem nlegharị anya mba abụọ dị mkpa iji mee ka akụ nke ụlọ ọrụ abụọ ahụ dị n'otu ka ha na -emepụta mmekọrịta dị mma n'etiti ha abụọ.
Mịnịsta Radegonde tụrụ aro ịkpọ ndị ọkachamara njem nlegharị anya site na ụlọ ọrụ onwe ha ka ha sonye na kọmitii ndụmọdụ ọhụrụ iji nyere gọọmentị aka nke ọma n'idozi ihe metụtara njem, ndị SHTA nabatara nke ọma na ụlọ ọrụ njem na-ewusi ike mgbe ngalaba nkeonwe na nke ọha na-emekọ ihe ma na-enye aka na atụmatụ na iche echiche nke ọma na ịchepụta ụzọ maka nsogbu mba.
Uru maka ego bụ otu isi nsogbu chere ụlọ ọrụ ahụ ihu, Minista Radegonde kwughachiri atụmatụ ngalaba ahụ iji kwalite ahụmịhe onye ọbịa; a ga -eduzi ntule na ndepụta saịtị nwere mmasị na ngwaahịa ebe obibi yana nyocha ntinye nke saịtị ndị nwere akara iji hụ na ndị ọbịa na -enweta ego.